राहत दिनबाट कहाँ चुके बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओ साबहरुः आफ्नै चुलोबाट काटेर राहत दिने यी चार बैंकर - Aathikbazarnews.com राहत दिनबाट कहाँ चुके बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओ साबहरुः आफ्नै चुलोबाट काटेर राहत दिने यी चार बैंकर -
नेपालमा पछिल्लो समय २ जनाले कोरोना भाईरसका कारण ज्यान गुमाएका छन् । ५०० को हाराहारीमा कोरोनाका कारण विरामी भई कोरोना बिरुद्ध लडिरहेका छन् । नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी भन्दा अब चाहि फरक नपर्ला । यस्तो अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाईरसले विश्वका सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरु रोहिरहेका छन् । लाखौ लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपाल विगत ५८ दिन देखि लकडाउनमा छ । नेपाली कोरोना महामारी बिरुद्धको लडाई जित्न घर भित्रै पीडादायी जीवन विताई रहेको छन् । उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय देखि नेपालीहरुको चुलो सम्मलाई लकडाउनले पूर्ण रुपमा असर पारेको छ ।
गरिब विपन्न, मजदूर मात्रै होइन । अव चाहि मध्यम वर्गको पनि चूलो बल्न कठिन बन्दै गएको छ । भनिन्छ यो बेला कमाउनेले दिने हो नहुनेलाई ? देश रोहिरहेका बेला देशलाई बचाउने र जनतालाई साथ दिने हो हुनेखाने र धेरै कमाउनेले तर आज धेरै कमाउनेहरु मुठठी खोल्न तयार देखिएका छैनन् ।
संस्थका प्रमुख, सीइओहरुले आफ्नो मंहगो तलब भत्ता र अन्य सुविधाबाट कोरोना कोषमा १० प्रतिशत मात्रै दिने हो भने अर्बै पैसा जम्मा हुने देखिन्छ । तर, यी महंगो तलब भत्ता र अन्य सुविभा लिने मध्ये बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ सोभन देव पन्त, १ महिना, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ रमेश कुमार भट्टराईले २ महिनाको तलब क्रमश ५ लाख ५१ हजार ४ सय १४ र ५ लाख ८४ हजार कोरोना कोषमा दिएका देखिन्छ ।
नेपालका केही बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुले नाफाको १ प्रतिशतबाट जम्मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राज्यले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा रकम दिए पनि लाखौ लाख मासिक तलब खाने ४ जना बैंकर बाहेक अरु कसैले दान गर्न सकेका अवस्था देखिदैन । दान गरौ पुण्य कमाउन, मौका सधै आउँदैन यो हुनेले नहुनेर्लाइ दिने बेला हो । राज्यलाई विश्वास नभए नदिए ती गरिब मजदूरलाई १ छाक खाना त खुवाउ । तर, नेपालमा हुनेले नहुनेलाई दिने कुरा अन्र्तवार्ता र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी ९० माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, १९ जीवन वीमा कम्पनी, २० निजीवन बीमा कम्पनी, १ वटा पुर्नबीमा कम्पनी छन् । यी संस्थका प्रमुख, सीइओहरुले आफ्नो मंहगो तलब भत्ता र अन्य सुविधाबाट कोरोना कोषमा १० प्रतिशत मात्रै दिने हो भने अर्बै पैसा जम्मा हुने देखिन्छ । तर, यी महंगो तलब भत्ता र अन्य सुविभा लिने मध्ये बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ सोभन देव पन्त, १ महिना, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ रमेश कुमार भट्टराईले २ महिनाको तलब क्रमश ५ लाख ५१ हजार ४ सय १४ र ५ लाख ८४ हजार कोरोना कोषमा दिएका देखिन्छ ।
नाफामा होडवाजी गर्दै ब्याजको बम्पर छुटको वर्ष दिने र सामाजिक सञ्जालमा ठूला कुरा गर्ने भिडियो नै बनाएर जनतालाई देखाउने बैंकहरुले आफ्नो मंहगो तलबबाट १० प्रतिशत रकम कोरोना कोषमा किन राख्न सक्दैनन् । के जनता नै नरहे बैंक र वित्तिय संस्था चल्दछन् ? नाफा हुन्छ, व्यापार हुन्छ, मंहगो तलब भत्ता लाखौ लाखका गाडी उहाँहरुले चढ्न पाउन हुन्छ । यो चाहि सोचनिय बिषय कोरोना भाईरसले ल्याएको देखिन्छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका सीइओ गणेश राज पोखरेलले तलबबाट १÷१ लाख दिएको देखिन्छ तर अरु कुनै पनि बैंक र वित्तिय क्षेत्रका मंहगो तलब भत्ता खानेहले हातको मुठ्ठी खोल्न सकेका छैनन् ।
आफूलाई ठूला बैंकका बैंकर हुँ भन्ने कहाँ छन् । नाफामा होडवाजी गर्दै ब्याजको बम्पर छुटको वर्ष दिने र सामाजिक सञ्जालमा ठूला कुरा गर्ने भिडियो नै बनाएर जनतालाई देखाउने बैंकहरुले आफ्नो मंहगो तलबबाट १० प्रतिशत रकम कोरोना कोषमा किन राख्न सक्दैनन् । के जनता नै नरहे बैंक र वित्तिय संस्था चल्दछन् ? नाफा हुन्छ, व्यापार हुन्छ, मंहगो तलब भत्ता लाखौ लाखका गाडी उहाँहरुले चढ्न पाउन हुन्छ । यो चाहि सोचनिय बिषय कोरोना भाईरसले ल्याएको देखिन्छ ।
जनता बचाउन औषधी मूलो उपकरण किन्न राज्य कोषमा केही दान गरौं । स्वर्ग जाने बाटो आजैबाट तयार गरौं । नेपालमा अहिले पीडा सबैमा छ । यो सत्य हो तर, हुने खाने वर्ग किन चुप छ । यो चाहि खोजीकै विषय बन्ने पर्दछ । नेपालमा २७ वाणिज्य बैंकका सीइओ साबहरुले मासिक १० लाख भन्दा बढि तलब खाने गर्दछन् । यस्तै विकास बैंक ५ लाख भन्दा बढि, फाइनान्स कम्पनी ४ लाख भन्दा बढि, सबै जीवन बीमा कम्पनी लाइफ, ननलाईफका सीइओहरुको तलब ५ लाख भन्दा बढि छ । उनीहरुले १ महिनाको दिन नसके पनि तलबको १० प्रतिशत कोरोना कोषमा दिने आट अब गर्नु पर्ने बेला पक्कै आएको छ ।
आफ्नो चुलोबाट केही रकम जनताको चुलो बाल्न दिने परम्परा शुरु गर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? बैंक, विकास बैंक, वित्तिय कम्पनी र बीमा कम्पनीका सीइओ सावहरुले कोरोना कोषमा दान गर्दा घरवारी नै जादैन १ महिनाको तलब दिँदा परिवार भोकै हुँदैनन् होला ।
यस्तै माईक्रो फाइनान्सको २ लाख भन्दा बढि छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट केही रकम कही बैंक र वित्तिय संस्था, केही बीमा कम्पनीहरुले राज्य कोषमा दिए पनि जनताकै डिपाजिटबाट नाफा कमाउने र लाखौ लाख माथी उल्लेखित संस्थाका सीइओहरुले बुझ्ने तलबबाट किन दिइरहेका छैनन् कोरोना राहत ?
जनता रहे देश रहे अनि मात्रै अर्थतन्त्र रहने होला । बैंक, बीमा वित्तिय कम्पनी र अन्य कुरा रहने होला । त्यसकारण आफ्नो चुलोबाट केही रकम जनताको चुलो बाल्न दिने परम्परा शुरु गर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? बैंक, विकास बैंक, वित्तिय कम्पनी र बीमा कम्पनीका सीइओ सावहरुले कोरोना कोषमा दान गर्दा घरवारी नै जादैन १ महिनाको तलब दिँदा परिवार भोकै हुँदैनन् होला । यो विषम र विपतमा प्रधानमन्त्रीज्यू ।
कोरोनाबाट बच्न र अरुलाई बचाउन हातको मुठ्ठी खोलौ र केही दान गरौं, पुण्य कमाऊ हैं । आजलाई यत्ति ।
एक प्रतिक्रिया on “राहत दिनबाट कहाँ चुके बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओ साबहरुः आफ्नै चुलोबाट काटेर राहत दिने यी चार बैंकर”
Mega bank ko CEO le diyako chh. Alik khoj garne gara aab dekhi
२२ स्थानको जग्गा लिलामी गर्दै प्रभु बैंक
बेष्ट फाइनान्समा विवाद, अध्यक्षलाई हटाउने तयारी
ब्रोकर एसोसिएशनमा सन्तोष मैनाली अध्यक्षमा सर्वसम्मत
प्रभु बैंकले कोभिड प्रभावित शिक्षकलाई बिना धितो चार लाख ऋण दिने
१० जीवन बीमा कम्पनी आईपिओ निष्काशन तयारीमा
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सनराइज क्यापिटलको आफ्नो संस्थापक सेयर बेच्दै, लिलामी बोलपत्र आह्वान
माछापुच्छ्रे बैंक कर्पोरेट सुपर सिक्स प्रतियोगिता शुरु
लोकतन्त्रमा पनि बदलाकै भावनामा सरकार
आजभन्दा १० वर्ष अगाडि प्राइम लाइफले जसले जति योगदान गर्छ उसले त्यति नै पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याइसकेको हो